Uyihlela njani imifanekiso kwi-App yeefoto ze-Android
Ukuhlela umfanekiso kwiNkqubo yeefoto kwifowuni yakho ye-Android, kuya kufuneka wenze imo yokuHlela iMifanekiso. Le ndlela ikwenza ukuba ezinye zeziphumo zeapp kunye nokuhlelwa kwemifanekiso, kodwa konke kuqala xa ulandela la manyathelo:
Bonisa umfanekiso ofuna ukuwuhlela okanye usebenze ngenye indlela.
Thepha Hlela icon. Ukuba awuyiboni, cofa iscreen kwaye siyabonakala.
Umjikelo omhlophe 10 325
Izixhobo zokuhlela zinikezelwe ngokweendidi ezintathu, ziboniswe ezantsi kwesikrini kwaye ziboniswe apha: useto olusisiseko, iziphumo zomfanekiso, kunye nesityalo. Useto olusisiseko luboniswa kulo mzobo, obandakanya isixhobo sokuhlengahlengisa ngokuzenzekelayo, ukukhanya kunye nokungafani, umbala, njalo njalo.
Ukuhlelwa kwemifanekiso kwiNkqubo yeefoto.
Utshintsho lusetyenziswa kwangoko kumfanekiso. Cinezela i-icon yokusetha kwakhona ukulungisa utshintsho. Ukucima yonke into, cinezela Rhoxisa i icon. Okanye, xa wanelisekile yimigudu yakho, cofa iqhosha lokugcina.
Ukuphononongwa kweGarcinia Cambogia yeCambogia yokunciphisa umzimba
Iziphumo zomntu ngamnye zinokuba neempawu zakhe zokuRhoxisa kunye nezenziwe. I icon eyenziwe yenziwa apha. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ucofe iqhosha lokugcina ukugcina umfanekiso ohlaziyiweyo.
Yeyiphi i-claritin okanye i-allegra engcono
iinxalenye zenkqubo yamathambo
intambo intyatyambo emhlophe
Uyikopa njani i-dvd
baclofen 10 mg yeyantoni